Ọkọlọtọ Ọdịnaya nke Ahịa Ahịa | Martech Zone
Tuesday, May 8, 2012 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Newsreach eweputala ma otu infographic na mpempe akwụkwọ na-eso ya, Ezi Uru nke Ahịa Ahịa.
Mpempe akwụkwọ nke otu ọdịnaya dị elu nwere ike ịdọta ma tinye ndị ọrụ weebụ, mana n'onwe ha agaghị enwe mmetụta ịchọrọ. Ọdịnaya Ọdịnaya na-achọ mbọ na-aga n'ihu iji mepụta mpempe akwụkwọ dị oke mkpa dị mkpa. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eche ihe ịma aka ihu na imepụta olu na ọtụtụ ọdịnaya na-etinye aka dị mkpa, nke bụ ebe ụlọ ọrụ na-azụ ahịa ọdịnaya nwere ọrụ. Dị ka usoro mmepụta ọla edo, achọrọ aka aka ọkachamara na oge ọ bụla iji mepụta ngwaahịa kachasị mma.
Otu ọnụ ọgụgụ na ihe omuma a kwesịrị ịbụ onye na-emeghe anya maka ndị kwenyere na a ga-ahapụrịrị ọchụchọ ahụ kpamkpam: 27 nde iberibe ọdịnaya na-akọrọ site na mgbasa ozi mgbasa ozi. Nke a ka na-apụtachaghị na ya 131 ijeri nyocha emere maka ọdịnaya kwa ụbọchị. Anyị kwenyere na ọchụchọ ahụ bụ ntọala… mana nnukwu ọdịnaya ga-emesịa metụta nsonaazụ ọchụchọ gị n'ihi mmetụta na-eto eto nke mmekọrịta mmadụ na algorithms na search engine. Emela hapụ SEO kpamkpam… Ma gbado anya na oke ọdịnaya na nkwalite nke ọdịnaya ahụ tupu ị na-echegbu onwe gị maka ịbubata isiokwu ma ọ bụ backlinking!
Tags: content Marketingatụmatụ ịre ahịa ọdịnayainfographic
Mee 10, 2012 na 11: 55 AM
Daalụ maka ikenye Douglas. Ọ na-atọ gị ụtọ ịgụ ihe ị na-agụ na stats.